AmaBhunu ahlose ukukhipha iWestern Cape kuleli - Bayede News
Home » AmaBhunu ahlose ukukhipha iWestern Cape kuleli
Akubethusi okushiwo amaBhunu
Angibasoli phela thina uma singaphansi kwengcindezelo bona babekuntando yeningi eyayivuna bona abamhlophe, kwathiwa siyaphuma engcindezelweni sanikwa le nto esikuyo kwathiwa sikhululekile yini yona le? Ububha, inkohlakalo, ukusoconga hhayi amanyala alapha! – nguMthandeni Manana
Ngeke wawasola nawe ungumuntu uKhongolose ulibulele leli lizwe nendlela i-Economic Freedom Fighters (EFF) eyenza ngayo yokuba amabhoklolo kuvikwe ngokuthi ilungelo, angiyiboni isiyisa phambili njengesizwe. Bheka nje abokufika eGoli yibo asebekunika indawo yokufihla ikhanda uqasha emabhilidini abo, izikole zamakhono ngezabo bebe bengafikanga nalutho. Lapha thina esingumsinsi siswele ngisho itoho. – nguSkhosiphi Mpungose
Bangaze bafise ukuphuma abelungu, ingcolile iNingizimu Afrika igcwele inkohlakalo, abantu basemazweni angaphandle bayangena bayaphuma nje bazenzela umathanda benza ubugebengu, basabalalisa izidakamizwa benza yonke le nto abangeke bekwazi ukuyenza kwamanye amazwe akhona lapha e-Afrika. UHulumeni we-ANC uthule sengathi akaboni. – nguBongani Ndlela
Sebengagxekwa nje kodwa uma kukhulunywa iqiniso akusemnandi ukuba umhlali waseNingizimu Afrika ngenxa yalo Hulumeni wenkohlakalo. Abantu bakithi bayahlupheka imisebenzi iphelile zonke izinkampani zikaHulumeni ziwile. Kwakugcono kusaphethe amaBhunu yize babehlukunyezwa abazali bethu kodwa babesebenza ikhona nemisebenzi hhayi le nkohlakalo esiyibona manje. – nguDjthamza Mkhabela
Enza kahle nami ukuba kuya ngami ngabe ayikho into engihlanganisa neNingizimu Afrika. Akekho ongaboni ukuthi lapha kudunguzwa ontwini. Angibasoli abelungu ama-Afrika anomsindo kakhulu kuningi ukungahleleki kubona. – nguNyambose Mthethwa
Bagxeka isenzo samaBhunu
Kakade nje amaBhunu ayasizonda singaboHlanga futhi awazenzisi. Acabanga ukuthi angcono kunathi ngoba wona uchuma umnotho wawo. Konke lokhu kufezekiswa incwadi kaDuteronomy-28 yonke nakuvesi-49. Uma singaboHlanga singabuyela esivumelwaneni esenziwa okhokho bethu noJehova wethu mhlawumbe lolu laka olungaka lwenhlupheko lungadamba nabelumbi bangabaleka bashiye konke abakushaqa ngokuhlubuka kwethu kuNkulunkulu. Bangasho nje labo abafuna ukuxebuka ezwenikazi ngoba bekholelwa ukuthi umsusa wezinkinga ezikhungethe izwe iqembu eliphethe kanti indaba iqala emva ekuphuleni umthetho kaNkulunkulu. – nguHandry Handry
Ingozi enkulu ukuthi ondlebezikhanyilanga bangathola indawo abathi ngeyabo lapha eNingizimu Afrika. Kade kwasa ngisho ngithi abamhlophe banohlelo eliwumshoshaphansi oneminyaka eminingi seloku bafika kuleli lizwe. Ukuthola kwabo leya ngxenye yesifunda ibe yizwe labo kobe kusho ukuthi iNingizimu Afrika iwadayisile amazwe ase-Afrika ngoba lesiya sifunda siyoba isizinda se-Europe ukuthi batshale kuso izinhloli zabo ukubheka noma yini eyenziwa amazwe ase-Afrika bengaphakathi njengesisho sesilungu esithi “destroy from within”. Ingathithi phela nesifunda sakwa-Israel sakhelwa inhloso efanayo nale abafuna ukuyenza lapha e-Afrika besondelela ukucekela phansi izizwe zama-Arabhu. – ngu-Amun-Ra Heru Apis
Impela asekhulumile amaBhunu. Empeleni kakusona sodwa lesi sifundazwe esifunwa ngabadeshi. NaseNorthen Cape sekunedolobha elakhiwayo ngamaBhunu ngenhloso yokuthi libe indawo yabo. IWestern Cape ihlukaniswe umngcele neNorthern Cape. Lokhu kusho ukuthi baqonde ukudla lezi zifundazwe zombili. Kakuthusi okushiwo ngamaBhunu. Izizathu zenkulumo yawo yilezi: Zolo lokhu iDA ephethe eWersten Cape ishiywe ngaboHlanga ngakho ukuthi abelungu sebeqoqa okungokwabo. Okwesibili abelungu bathatha ngokuthi bayahlushwa njengoba uMalema ebelesele ngendaba yokuthathwa komhlaba. Okwesithathu bakhihla isililo bathi bayabulawa emapulazini kodwa uHulumeni akenzi okwanele ukubavikela. Okwesine bathi kabasazuzi njengezakhamuzi kuHulumeni wakuleli ngesizathu sokuthi kubhekelelwa aboHlanga ababecindezelwe. Okwesihlanu inhloso yeDA yokuthatha izintambo zombuso ibukeka iluvindi, ngakho sebehlangene nabakwabo abamhlophe bathi isixazululo ukuba babe nezwe labo. Nokho kubukeka kungelula abakufisayo ngoba emazweni amaningi oHulumeni kabamuvumi uzimele geqe ngoba lokho kuze kuholele ezimpini ezichitha igazi. Isibonelo: ngaphambi kokuba iSudan ihlukane kabili kube iSudan neSouth Sudan kwabheduka izimpi ezabulala abantu. Cishe neSouth Korea neNorth Korea yahlukana kabili emva kwezinkinga ezithile. Okumanje kunempi enzima eCameroon. Ingxenye yezwe lakhona elikhuluma isiNgisi lifuna uzimele geqe. ENigeria, eSomalia, e-Iraq ingxenye ethile yamaSulumane kula mazwe ifuna uzimele geqe ezingxenyeni ezithile zezwe. Lo mbango usubulele abaningi ngesandla se-Islamic State. Njengoba kungelula ukuthola uzimele geqe, ngiyacabanga abamhlophe bazonxenxa amazwe omhlaba nezinhlangano ezifana ne-UN ukuba zibasize kulokhu. Uma singafezeka isifiso sabadeshi kuyosho ukufuduka kwezinkampani, abalimi nabatshalimali abamhlophe bafudukele ezweni labakwabo. – nguSipho Mbatha
Bayede News Nov 20, 2020